प्रियंका पेड़ीवाल (अग्रवाल)
यो २१ औं शताब्दीमा हामी आधुनिक भइरहेका छौं तर यो आधुनिकीकरणले अनुचित खर्चलाई निम्त्याएको छ। पहिले घरमा एक व्यक्ति कमाउने हुन्थ्यो भने अरुले आराम गर्दा पनि सबै पुगेको थियो, तर अहिले चार जनाले कमाउँदा पनि घर खर्च चलाउन हम्मे-हम्मे पर्छ।
आज यदि हामीले एक महिनाको तलब प्राप्त गरेनौं भने परिवारमा ठूलो समस्यादेखापर्न थाल्छ । किन यस्तो भयो … ???
यसका पछाडि केही यस्ता कारण हुन सक्छन्ः
म आजको विलासी जीवनशैलीको विरुद्धमा छुइनँ, तर त्यो एक सीमासम्म मात्र हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो आम्दानीले हामीलाई कत्तिसम्म खर्च गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यसमा पनि भविष्यका लागि निश्चित प्रतिशत बचत गरेर मात्रै ।
बाँकी रहेको रकम आफ्नो पारिवारिक बजेट बनाएर हामीले खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर हामी बचत गर्नु त परै जाओस् देखासिकीमा परेर झन् उधारो लिएर पनि आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्छौं । यो कहाँको बुद्धिमानी हो ?
मानिसहरूले आज आफ्नो रवाफ देखाउन आफ्नो आम्दानी हेर्दैनन् किनकी अस्वस्थ प्रदर्शन आजको जीवनशैलीको हिस्सा बनिसकेको छ। यसले वस्तुहरूको अनावश्यक खरिदमा हामीलाई डोहोर्‍याउँछ। जसले गर्दा अनावश्यक कर्जाको बोझ बढन् जाऩ्छ र हामी कहिल्यै पनि यस्ता कर्जाबाट मुक्त हुन सक्दैनौं । झुठो प्रदर्शनको चक्करमा सम्पूर्ण जीवन कर्जाको भारले थिचिएर उठ्नै नसक्ने हुन जान्छ।
आजभोलि सामानहरूको अनलाइन बिक्री प्रचलनमा छ । मान्छेहरू घर बसी-बसी आफ्नो सुविधाअनुसार सामानहरू अर्डर गर्छन् र घरको ढोकैमा सामानहरू आइपुगोस् भन्ने चाहन्छन् ।अनलाइन कम्पनीहरूले यही मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । कम्पनीहरुले यस्तो छुटको प्रस्तावहरू देखाउँछन् कि मान्छेले आवश्यक मात्र होइन अनावश्यक सामान पनि छुटको मायाजालमा फसेर अर्डर गरिहाल्छन् । अब तपाईं नै सोच्नु तयस्तो कार्यले मान्छेको बजेट बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन ?
महँगो स्कूल र शिक्षण संस्थाहरू
आजभोलि निजी स्कूलहरूको शुल्कले आकाशै छुन लागेको छ । देखावटी जमानामा चलेको यो समाजमा मान्छेले तँछाड-मछाड गर्दै यस्ता स्कूलहरूमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पढ्न पठाइराखेका छन् । त्यसमाथि ट्युसन पढाउनै पर्ने फेसन पनि हाम्रो घरहरूमा भित्रिइसकेको छ । यसले सीमित कमाइ हुनेहरूको बजेट बिगार्नमा केही कसर बाँकी छोडेको छैन। आजभोलि धेरै यस्ता शिक्षण संस्थाहरू छन्, जसले विध्यार्थीहरूको भावनामा खेल्दै परीक्षामा धेरै अंक आउने प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई महँगो प्राईभेट क्लासेस लिनतर्फ आकर्षित गरिरहेका छन् ।अनिआजको यो व्यस्त जीवनशैलीमा आमा-बुबासँग आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने फुर्सदसमेत छैन ।
• ब्रान्डेड लुगा र नयाँ ट्रेन्ड्स:
लुगा महँगो भए मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने सोच आजको नयाँ पिढीमा विकास भइसकेको छ ।उनीहरूको विचारमा त्यस्ता लुगाहरू मल या ब्रान्डेड शो-रुमहरूमा मात्रै पाइन्छ ।जब मलहरुमा गइन्छ, त्यहाँ लुगाको दाम धेरै नैमहंगो हुन्छ ।जुन दाममा मलहरुमा एउटा लुगा आउँछ अरु ठाउँमा सोही दाममा पूरा परिवारको लागि लुगा किन्न सकिन्छ ।त्यसमाथि आजभोलि फेशनले मौसम जस्तै रुप बदलिन्छ ।एकपटक लगाइसकेको लुगा अर्कोचोटि लाउन कोही पनि चाहँदैनअनि लुगासँगै कलर मिल्ने पर्स र जुत्ताको खर्च पनि व्यहोर्नुपर्छ।
आजभोलिको आधुनिक युगमा मान्छेहरूलाई जे पनि लेटेस्ट चाहियो । जस्तैः लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट कम्प्युटर, लेटेस्ट गेजेट्स आदि । जसले गर्दा मानिसहरू घरभित्रै बाँधिएर रहिसकेका छन् ।अब यसका फाइदा कम्पनीहरूले उठाइरहेका छन् र त्यस्ता सामानहरूको मोडीफायड भर्सन बनाएर उच्च दाम राखी बेचिरहेका छन् । यति पैसामा त एक साधारण परिवारको महिना दिनको भोजनको व्यवथा मिल्न जान्छ ।
यदि हाम्रा छिमेकी वा हाम्रा चिनेकाहरू कोही कतै घुम्न गएका छन् भने हामीलाई पनि तिनीहरू जस्तै दुनियाँलाई देखाउन कुनै नकुनै महंगो ठाउँमा घुम्न जानु नै पर्ने हुन्छ । देखासिकीको यस नराम्रो बानीले मध्यम वर्गको पारिवारिक बजेट संकटको भुमरीमा फस्न बेर लाग्दैन । अन्ततः हाम्रो बजेट यसले बिगारेरे नै छोड्छ ।
आजकल स्वस्थ्य रहने कुरा एउटा फेशन बन्दै गएको छ र यो कुरा अब कम्पनीहरूका लागि एउटा कमाउने राम्रो मौका बन्न पुगेको छ । यही क्रममा कम्पनीहरूले अब सब्जीलाई अर्ग्यानिक भनेर बेचिरहेका छन् र उपभोक्ताहरू पनि यो कुरालाई राम्ररी नबुझी उनीहरूले भनेको भरमा महंगो किनेर आफ्नो घरको बजेट बिगारिरहेका छन् ।
घरमा काम गर्ने महंगा कामदारहरू
आजकल मान्छेको लाइफ यति फास्ट भएको छ कि मानिसलाई आफ्नो घरको काम गर्नेसम्म समय छैन । फलस्वरूप आजभोलि काम गर्नेहरूलाई बढी पैसा तिरी घरमा काम गराउने चलन बढेको छ । जसले गर्दा घर खर्चमाथि अनियमित बोझ थपिएको छ ।
फिट रहनु र देखिनु आजको अर्को फेसन भएको छ, जसले गर्दा फिटनेस सेन्टरहरूको माग बढेको छ । हाम्रा सहरहरूमा एकसे एक राम्रा जिमखानाहरू खुलिरहेका छन्, जसमा मान्छेको लागि सबै सुख सुविधाहरू राखिएका छन् । यस्तो जिमखानामा जाने बानीले गर्दा मान्छेको खर्च बढ्न गएको छ र जसले घर घरको बजेट बिगारेको छ ।